DIP (amin'ny alàlan'ny fanangonana lavaka) - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Orinasa mpamokatra entana (EMS)
Vita vita (boaty PCBA + fananganana boaty)
Aorian'ny fametrahana ny singa SMT & QC'ed, ny dingana manaraka dia ny famindrana ireo tabilao amin'ny famokarana DIP hamita amin'ny alàlan'ny fivorian'ny singa loaka.
DIP = fonosana roa in-tsipika, antsoina hoe DIP, dia fomba fonosana miharo fampidirana. Ny endrik'ilay boribory mitambatra dia mahitsizoro, ary misy andalana roa ny tsimatra vy mifanila amin'ny lafiny roa amin'ny IC, izay antsoina hoe lohateny pin. Ireo singa ao amin'ny fonosana DIP dia azo soloina ao anaty plated amin'ny alàlan'ny lavaka amin'ny tabilao vita pirinty na ampidirina ao amin'ny faladiany DIP.
1. Fangaro fonosana DIP:
1. Mety amin'ny fametahana lavaka amin'ny PCB
2. Fanamorana PCB mora kokoa noho ny fonosana TO
2. Ny fampiharana ny DIP:
CPU an'ny 4004/8008/8086/8088, diode, fanoherana ny capacitor
3. Ny fiasan'ny DIP:
Ny puce iray mampiasa an'io fomba fonosana io dia misy tsipika roa misy pin, izay azo apetaka mivantana amin'ny sobika puce miaraka amina rafitra DIP na apetaka amin'ny lavaka fametahana mitovy. Ny mampiavaka azy dia ny hoe afaka manatratra mora foana ny fantsom-bozaka amin'ny takelaka PCB ary mifanaraka tsara amin'ny motherboard.
4. Ny tsy fitovian'ny SMT & DIP
SMT amin'ny ankapobeny dia miakatra singa tsy misy firaka na firaka fohy. Mila apetaka amin'ny takelaka boribory ny paty solder, avy eo apetraky ny mounter puce, ary avy eo apetraka amin'ny soldering refow ilay fitaovana.
DIP soldering dia fitaovana fonosana mivantana-fonosana, izay amboarin'ny soldering onja na soldering manual.
5. Ny mahasamihafa ny DIP & SIP
DIP: Andalana roa mitarika avy amin'ny sisin'ny fitaovana ary eo amin'ny zoro ankavanana mankany amin'ny fiaramanidina mifanitsy amin'ny vatan'ny singa.
SIP: Andalana fitarihana mahitsy na tsimatra mivoaka avy eo amin'ny sisin'ny fitaovana.